Maumbirwo eprojekti. Kubva paWordpress kuenda kuna Jekyll 5 | Linux Vakapindwa muropa
Maumbirwo eprojekti. Kubva paWordPress kuenda kuJekyll 5
Rimwe rematambudziko randakasangana naro riini edza kupasa kubva kuWorpress kuenda kuJekyll fIni ndinofanira kunzwisisa kuti chimwe nechimwe chikamu chaive chei uye kuti vaisangana sei. Ndakawana mhinduro pandakamira kuyedza kugadzira yangu blog kubva pakutanga uye ndikatanga kudzosera mainjiniya dingindira yakagadzirirwa nemumwe munhu. Izvo zvakanakira yakavhurwa sosi.
Kuti utange, uchifungidzira kuti iwe waisa izvo zvinodiwa isu takatsanangura muzvinyorwa zvakapfuura, ngativake yedu saiti. Muenzaniso iri gadheni blog.
Ukaenda kufolda uchaona zvinotevera:
Folda yakadaidzwa _maposi.
Mafaira maviri ane chiratidzo chekuwedzera
Faira rekumisikidza ine .yml yekuwedzera yatichakurukura zvakanyanya muchinyorwa chinotevera.
Faira reGemfile rinonyora zvinhu zvesaiti uye rimwe rezita rakafanana asi iine.
1 Maumbirwo eprojekti
1.1 Zvemukati-zvakavakirwa mafolda
1.2 Ruzivo maforodha
1.2.2 _kana iwe
Kunge chero WordPress-based saiti, Jekyll zvakare inogadzira dhairekitori fomati umo inochengetera mafaera ese, uye inoita saizvozvo nezvikonzero zvakafanana. Bvumira mushandisi kuunganidza mafaera nenzira yakarongeka uye, sezvo chirongwa chinokura, chinoramba chichikwanisika
Isu tinogadzira iyo base folda nemirairo jekyll new. Mukati maro tinowana mhando mbiri dzemafaira; izvo zvinoenderana nekugadziriswa kweblog izvo zvinoonekwa zvine dash pamberi pezita (mune yedu _post folda uye izvo zvine zviwanikwa izvo zvisingazobatanidzwe sechikamu chegadziriro. Semuenzaniso, izvo izvo rine mifananidzo.
Muboka iri se inochengetera zvemukati zvakagadzirirwa vashanyi vesaiti
The folda _post ine zvese zvinyorwa zveblog. Pano fomati yakasarudzika inoshandiswa kune yega yega mafaera akachengetwa mairi. Iro zita refaira rinofanirwa kunge riri muchimiro che date-filename - gore-month-date-full_filename.md - uye iri zuva rekutumira richaratidzirwa sezuva rakagadzirwa iri Jekyll blog. Tinofanira kuyeuka kuti kunyangwe dura racho rakadaidzwa _ zvinyorwa, hezvino zvese zvirimo zvinoonekwa nevanoverenga blog, semuenzaniso fomu rekutaurirana kana nhoroondo dzevanyori. Gare gare tichaona kuti zvinokwanisika kugovera akasiyana dhizaini kumapeji.
Izvo zvakaenzana nekuchengetedza WordPress dhizaini. Kushandiswa kwaro kwakakurudzirwa ndekwezvinyorwa zvisina kugadzirira kuburitswa kunyangwe zvichizoshandiswa kuchengetedza zvinyorwa zvemazano, dhizaini yekushandisa gare gare, nezvimwe.
Munzvimbo ino tinogona kuchengeta html kodhi inogona kushandiswazve kakawanda. Semuenzaniso, kwatiri isu chikwangwani chinokwazisa kutanga kwemwaka zvichienderana nehemisphere mune mushandisi.
Sezvatakataura pamusoro, zvidimbu zvakasiyana zvemukati zvingangoda marongero akasiyana. Semuenzaniso, kuratidza vhidhiyo isu tingangoda kuti iro peji rive kholamu imwe chete, nepo kana iri munyori wevaeni isu tingangoda mbiru kuratidza yavo biography uye ruzivo rwekuonana. Dhizaini dzakasiyana idzo saiti inozoshandisa dzinochengetwa mune ino folda.
Aya mafolda maviri anoshandiswa nenzvimbo yekushandisa kwayo.
Mune blog yemurume mumwe chete, iyo faira yekumisikidza inogona kuchengeta rese data rinodiwa. Asi, kana isu tiine blog ine vanyori vazhinji, imwe nzira yekugadzirisa ruzivo inodiwa. The folda _data Iyo inoshandiswa kuchengetedza data muJSON kana CSV mafomati ayo saiti inogona kutora maererano nekubatana nevashandisi.
The folda _kana iwe Iyo saiti inoipedzisa neruzivo rwese rwuripo mumafolda apfuura. Pano tichawana saiti yatinoisa kuseva kuti vashandisi vakwanise kuwana. Ehezve, sezvo iri html uye css kodhi, zvinokwanisika kuita zvigadziriso kwazviri seimwe webhusaiti.
Muchinyorwa chinotevera isu tinotanga kugadzirisa iyo yekumisikidza faira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Maumbirwo eprojekti. Kubva paWordPress kuenda kuJekyll 5
Maitiro ekugadzirisa saiti yeblog yedu. Kubva paWordpress kuenda kuna Jekyll 6